Ahoana ny fanamarinana ny famolavolana mailaka mamaly sy ny toerana ahazoana fanampiana! | Martech Zone
Tena manaitra nefa olona maro kokoa Ampiasao ny smartphone -n'izy ireo hamaky ny mailaka toy izay hiantsoana telefaona (ampidiro eto ny fanesoesoana momba ny fifandraisana). Ny fividianana modely an-tariby tranainy dia nidina 17% isan-taona ary 180% ny mpandraharaha mampiasa ny finday avo lenta mba hijerena mialoha, hanivana ary hamaky mailaka noho ny tamin'ny taona vitsivitsy lasa izay.
Ny olana anefa dia ny fandrosoana mailaka tsy nandroso haingana toa an'ireo mpizaha tranonkala. Mbola miraikitra amin'ny mpanjifa amin'ny Internet toy ny Outlook izahay izay miankina amin'ny HTML taloha mba handefasana mailaka araka ny tokony ho izy. Ireo mpanjifa mailaka vaovao dia hamoaka araka ny tokony ho izy ny kinova HTML sy CSS farany, mamela ny traikefa mailaka mahatalanjona. Tsy mora ny mandefa mailaka ary manome azy araka ny tokony ho izy ao anaty safidin'ny mpanjifa finday, tablette, tranonkala ary rindrambaiko maro karazana.
Tena ilaina ny mampiasa motera fitiliana toa Litmus (ampiarahintsika amin'ny sehatra fanaterana amin'ny 250ok, mpiara-miasa). Ny mailaka mamaly dia fitambaran'ny HTML, CSS ary HTML vaovao an-tsoratry ny latabatra. Ny fandrafetana ary na ny filaharan'ny kaody mailakao aza dia tena ilaina mba hampitomboana ny fahafahan'ny mpamaky manerana ny viewports.
Sintomy ny maodely mailaka mamaly maimaimpoana
Raha tsy manome maodely mamaly ny ESP anao dia misy loharano vitsivitsy eto amin'ny Internet hahazoana fanampiana amin'ny mailaka mamaly:
Zurb - dia namoaka andiana modely mailaka mamaly ny finday.
Email amin'ny Acid - manolotra andiana maodelim-bola maimaim-poana hananganana anao sy handehananao haingana araka izay tratra.
Litmus manana safidy noforonin'i Stamplia azonao sintonina miaraka amin'ireo PSD mifandray aminy.
MailChimp dia namoaka modely mamaly ao amin'ny Github. ary Respmail nanampy ny fanatsarana azy ireo manokana.
Loharano mailaka mamaly - Fanangonana fitaovana sy enti-miasa amin'ny famolavolana mailaka mamaly.
Themeforest dia manana safidy betsaka amin'ny fanomezana karama tsy mampino miaraka amin'ny rakitra Photoshop sy torolàlana.
Serivisy ho an'ny famolavolana ny mailaka sy ny fanodinana andraikitra
Uplers - raha mila endrika vaovao ianao na manana endrika mila kaody, ny olona ao amin'ny Uplers dia nanao asa tsara ho an'ny mpanjifanay vitsivitsy!
Highbridge - raha manana olana tsy manam-paharoa izay mila fanampiana ianao, aza misalasala manatona!
Highbridge - raha mpanjifan'ny Marketing Cloud na Pardot ianao ary mitady hampihatra famolavolana mailaka, modely ary maodelin'ny mailaka nozaraina dia ampahafantaro anay.
Amin'ny maha mpivarotra mailaka azy ireo, ny famolavolana mamaly dia lohahevitra iray nafana nandritra ny taona maromaro satria ity fitomboana tsy azo ihodivirana ity dia nanangona setroka. Tonga amin'ny teboka misy ny famolavolana mailaka mamaly, ny famolavolana mailaka IS! Ao amin'ny sary farany an'ny Instiler, nanangona antontan'isa manintona maso manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fikarakarana ireo mpampiasa finday amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny mailakao.
Instiller dia mpamatsy tolotra mailaka namboarina manokana ho an'ireo masoivoho izay manolotra vahaolana mailaka feno hamolavolana, handefasana ary hitaterana ny mailaka nalefa ho an'ny mpanjifany (misy koa ireo fitaovana fanaterana entana sy fanaraha-maso laza).
Ireo olona ao amin'ny Litmus dia nametraka ity lahatsoratra infographic mahafinaritra sy miaraka aminy ity, Ny torolàlana momba ny famolavolana mailaka mamaly.
Tags: 250okacqueousvahaolana mailaka an'ny masoivohompanamboatra mailakafamolavolana mailakamoanina mailakamailaka amin'ny asidramailaka viewportGitHubmpanodinalitmusmailchimpneteffektresmailmailaka mamalympamorona mailaka mamalyfamolavolana mailaka mamalymodely mailaka mamalyzurb